घर फर्किनेका दुःख
२ जेष्ठ २०७८ आइतबार Sunday, May 16, 2021
KATHMANDUTemperature 29°CAir Quality72
२० चैत्र २०७६ बिहीबार
कोरोनाको त्रासबाट बच्‍न भारतबाट अनेकौँ सास्ती खेप्दै स्वदेश फर्किन लागेका १ सय ८१ नेपाली नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा तीन दिनदेखि अलपत्र छन् । दशगजामा अलपत्र परेकाहरु बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, रोल्पा, सल्यान, रुकुम, जुम्ला ,अछाम, मुगुदेखि झापासम्मका गरी २५ जिल्लाका छन् । उनीहरू खुला आकाशमुनि कष्टपूर्ण अवस्थामा छन् ।
नेपालमा रहेका भारतीय यतै र भारतमा रहेका नेपाली लकडाउनभरि उतै बस्‍नुपर्ने गरी लकडाउन भएपछि सीमामा आइसकेका नेपाली रोकिनुपर्‍यो। दशगजासम्म आइसकेका नेपालीलाई भारततर्फै क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍ने व्यवस्था मिलाउन भारतीय सुरक्षा अधिकारी तयार थिए । तर नेपालीले स्वदेशमै फर्केर क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍ने अड्डी लिए ।
४०/५० किलोमिटर पैदलै हिँडेर भोकै प्यासै नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरुलाई भारततर्फ फर्काइएपछि स्थिति केही तनावपूर्ण बनेको थियो । उनीहरुले घर फर्किन नपाएकोमा आक्रोश पोखेका थिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उनीहरुलाई क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न तयार भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी निर्णयविपरीत प्रवेश गर्न दिएन । २० चैतदेखि भने दशगजा नजिकै टेन्टमा क्‍वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
दुई साता क्वारेन्टाइनमा बस्नु सजिलो कहाँ छ र ! त्यहाँ कसरी समय कटाउने ? धेरैलाई तनाव छ । य...
क्‍वारेन्टाइनमा मनोपरामर्शदेखि नाचगानसम्म
मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रामा रहँदा चिसो सिरोटोले मनै काँप्छ । तर प्रकृतिको सौन्दर्यमा रम्...
मनै लोभ्याउने मध्यपहाडी लोकमार्गको सेरोफेरो
साँझ छिप्पिँदै गर्दा लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर र नजिकैको पुष्करणी पोखरी मधुर बत्तीका क...
लकडाउनमा मनमोहक लुम्बिनी
लकडाउनका बेला सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कनु नै उचित सावधानी अपनाउनु हो । तर वरपर ननिस्की धरै छै...
भोकले भुलाएको लकडाउन
कतिपय चरा ओथारो बसिसके । कति भाले आकर्षित गर्न नाचिरहेका छन् । कतिपयले गुँड बनाउने शिल्पी ...
चराको संसारमा लकडाउन छैन
भिक्षु सिङकाङ दैनिक ६ घन्टा समय खर्चेर बुद्ध जन्मस्थलको हेरचाह गरिरहेका छन् । ...
जो लकडाउनमा बुद्धभूमि स्याहार्दैछन्